Misy mandany hatrany amin’ny 20.000 Ar isan’andro ny raim-pianakaviana iray mividy ireo karazana karatra 2.000 , 3.000 ary 4.000 Ar, hitsapana vintana sao dia mahazo volabe. 100.000 Ar mahery mantsy ny vola farafahakeliny azo avy amin’ny karatra iray amin’izy ireny raha araka ny fanazavana rehefa mipoaka. Tsy vitsy ireo voasarika, indrindra fa ireo malaina hisasatra sy ireo teren’ny fahasahiranana. Birao mihitsy no filazan’izy ireo ireny toerana misy ny fanarahana mivantana amin’ny fahitalavitra ny hazakazaka atao any ampita any ary tsy maintsy lalovana isa-maraina sy hanaovana kajikajy amin’ireo soavaly matanjaka sitrany ahay. Amin’ny ankapobeny dia ireo te-hanam-bola tampoka sy leon’ny fahantrana ny ankamaroan’izy ireo. Eo ihany koa anefa ireo tsy te-hiasa mafy nefa te-hikirakira vola ankoatra ireo tsy te-hisotro toaka dia manala azy amin’ny kilalao hazakaza-tsoavaly. Am-polony isan’andro ireo lehilahy tonga manatona ‘ny iray amin’ireny ivontoerana ireny ízay tena maniry ohatry ny anana eto an-drenivohitra .